विश्वासको मत लिनु अगाडी सबै नियुक्ति गरिसक्ने ओलीको दाउ ! - Kantipath.com
विश्वासको मत लिनु अगाडी सबै नियुक्ति गरिसक्ने ओलीको दाउ !
सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बस्नेगरी बैठक बोलाएका हुन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश हालै जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेश अनुसार परिषद्को उपस्थित सदस्यको बहुमतले नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, समावेशी आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी रिक्त छन् । संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख उपस्थित भएका थिएनन् । उनीहरु सहभागी नभएपछि ओलीले परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेका थिए ।
अहिले फेरि सरकारले अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गर्न लागेको हो । नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमतका आधारमा परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था छ । २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिदैछन, यस्तो वेलामा बोलाएको परिषद बैठकमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सहभागी हुने सम्भावना कम रहेको स्रोतको दावी छ ।
Previous Previous post: भ्रममा नपरौं, केपी ओलीसँग कुनै सहमति भएको छैन : नेता नेपाल
Next Next post: ओलीको पछि लाग्दा जसपामा एक्लिए ठाकुर